“Nabompompi labo abantu bazifakele bona bedonsa eziphethwini eziseduze kwabo ngoba bengenawo amanzi. Ayikho nje into eyintuthuko esiyenzelwayo kule ndawo kodwa ekugcineni kuthiwa kumele sivote. Sekuphele iminyaka emingaki nje sivota kodwa akukho ngisho intuthuko encane endaweni yethu.
“Sikhathele manje sekwanele. Akekho nje osinakayo thina nonendaba nokuthi siphila kanjani sivele salahlwa nje kanjalo. Esikhathini samanje ubani nje umuntu osakha amanzi esiphethwini ewabanga nezinkomo ?,” kubeka yena.
Ngesikhathi i-Echo ihambele kule nadwo amaye amalunga omphakathi asebenzela kazimbambele abezama ukuphesha umgwaqo ngenhlabathi abebeyikha eceleni kwawo umngwaqo.
Elinye ilunga lomphakathi lithe : “Imigwaqo eminingi umphakathi iwona owulungisile ngoba besekukubi kungasahambeki. Sizamile nathi ngendlela ebesingakwazi ngayo sabeka amatshe kodwa usabheda namanje. Ikhansela lethu nalo alisinakile nje goba ngisho izinombolo esanikezwa zona ukuthi sizishayele uma ngabe sinezikhalazo zomphakathi zikhala zingabanjwa asisazi nathi ukuthi kumele senze njani.”